IIndiya ineeklasi ezininzi zeVisa ezisekwe kwisizathu sokuba undwendwe luvela, oko kukuthi, ubuzwe babo kunye nenjongo undwendwe lujonge ukuza ngayo. Ngoko ke, i 2 Imiba ithatha isigqibo sokuba uyakulungela na i-India Visa kwi-intanethi. Ezi 2 zezi:
I-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye i-eVisa yaseIndiya ifumaneka kuphela kangangexesha eli-3 kuphela ngeenjongo zoKhenketho, uSuku lwama-30, unyaka om-1 kunye neminyaka emi-5.
IVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye eVisa yaseIndiya iyafumaneka kangangeentsuku ezingama-60 ngeenjongo zonyango. Ivumela ukungena kwe-3 ukuya eIndiya.